Kutenga Imba MuDhailand SePa Real Estate Mitemo | Mutemo Makambani Dubai
Kutenga Chivakwa KuDubai SeMutero WeReal Estate
Mafuta anogona kutenga
Kutenga imba muDubai kwaisawanzoita zvinhu zvakatwasanuka uye kurongeka sezvazviri ikozvino. Asi zvinhu zvava nani izvozvi. Kune mana matanho epamutemo ekutenga imba muDubai, uye isu tichavatarisa vese vari mune ino chinyorwa.
iwe unogona kuwana yako inotevera imba / real estate Investment-yakagadzirira.
kutenga kwezvinhu zvakatsiga uye nekukurumidza
Mutengi anofanira kunyoreswa neRERA.
Ramba uchifunga kuti sewe mutorwa, unobvumidzwa kutenga zvivakwa chete munzvimbo dzinonzi Dzinosarudzwa Dunhu reDubai. Idzi nharaunda dzakagadziriswa neIsa korona muchinda weDubai kurega avo vasiri-UAE uye vasiri-GCC varidzi vemunyika vawana mukana wekuva nemba mune emirate.
Izvozvi zvatajekesa izvo kunze kwenzira, ngatitsvagei nezve kuti iwe ungaite sei yako inotevera imba / real estate Investment-yakagadzirira. Saka zvakanyanyisa, kana zvasvika pakutenga chivakwa muDubai, nhanho dzemutemo dzinotevera semitemo yezvivakwa dzinofanira kuteedzerwa.
1. Kugadzira Mutengi Uye Mutengesi Chibvumirano
Paunenge uchinge waita kutsvaga kwako, wawana chaipo paki, waita tsvakiridzo yakawandisa pamusoro pekuvandudza, iyo nharaunda yeDubai, iyo ROI chii, uye nezvimwe, iwe unogona kuenderera nedanho rekutanga, riri rekukurukurirana mazwi epamhepo ekutengesa. nomutengesi. Iwe unogona kuita iyi nhanho pasina rubatsiro rwemumiriri weivakwa kana wezvemutemo wezano. Dzimwe dzese dzinofanira kuitwa neanozivikanwa ekuDubai real estate agency kana zviri pamutemo mafemu emakambani anoita izvi semitemo yezvivakwa.
2. Kusayina Chibvumirano Chekutengesa As Per Per Estate Real Laws
Mushure meizvozvo, chinhu chinotevera kusaina chibvumirano chekutengesa chinonzi zvakare Memorandum yeKunzwisisa (MOU). Gwaro iri muDubai rakanzi contract F uye rinowanikwa pawebsite yeDubai Land Department. Iyo chiyero muDubai ndeye gumi muzana yedipozheni muivhu kuti ibhadharwe kumutengesi panguva imwe chete. Kana danho iri rapedzwa, iwe uri pakati penzira.
3. Kunyorera Izvo Kwete Chekunze Chitupa (NOC)
Tevere, iwe unosangana nemutengesi muhofisi yeanogadzira. Icho chikonzero chemusangano uyu ndechekunyorera uye kubhadhara kweNo Objection Chitupa (NOC) chekufambiswa kwehuridzi. Iyo NOC ichazopihwa neinogadzira, asi mushure mekuratidzira kuti hapana mari yakabhadharwa pachivako nenzira yekubhadhara mabasa.
4. Kubata Kuchinjana Kutapa kweYako Nenzvimbo NeDubai Land department
Kamwe iyo NOC yakawanikwa, iwe unobva wasangana nemutengesi kuhofisi yeDubai Land Department kuti kuendesa kuchapera. DLD inokukumbira iwe kuti uite muripo wekubhadhara fomu nenzira ye maneja wekutarisa. Cheki iyi inofanirwa kubhadharwa kumutengesi pazuva rekutamisa. Pakupedzisira, zita nyowani remvumo richapihwa muzita rako, uye iwe uchave uri muridzi wepfuma muDubai.
Nzira Dzakasiyana dzeKutenga Imba MuDubai
Kana iwe usingakwanise kubhadhara imba muchivanhu muhomwe, iwe uchafanirwa kunyorera mari yekutora.
Kutenga midziyo seaturu kunganzwika kuomarara, paine zvipinganidzo zvakasiyana zvinokwanisa kuremadza vatambi venguva diki-diki. Asi Dubai Land Dhipatimendi nemimwe mitumbi inoona nezvemitemo iri kutungamira inoita kuti kutengwa kwepfuma kuve nyore uye nekukurumidza.
Ini ndinofanira kutenga off-kuronga imba?
Kunyangwe ichienzaniswa nedzimwe nzira, izvi zvinotora nguva. Iyo ndiyo chaiyo iri nyore nzira yekutenga zvivakwa muDubai.
Mutengi anofanira kutumira fomu rekunyorera kune anovandudza.
Pakubvumidzwa kwechikumbiro, mutengi anoenda kunzvimbo yekutengesa yeiyo mugadziri pazuva rakarongwa zuva rekutanga kusarudza unit uye kubhadhara dhipoziti yekutanga
Zvichienderana nehuremu hwayo, mutengi anogona kumirira makore maviri kusvika matatu asati agamuchira chivakwa. Iyo inovandudza ichapa zuva rekupedzesa.
Nei uchifanira kutenga imba pamusika wechipiri?
Iyi nzira ndiyo nzira inokurumidza kuwana pfuma muDubai, asi maitiro aya akaomarara zvishoma, ayo anosanganisira kuita kwakanaka kwemari.
Anosimudzira mari anoda kutenga imba iyo mutengesi ane chikwereti chemba inofanirwa kukwanisa kudzikisira mari yekutengesa mutengesi usati zita remvumo ratorwa kubva kubazi rezvepasi.
Kana icho chivakwa chikaonekwa, mutengi anopa chinotengeswa kumutengesi, uye kana ichi chapiwa chagamuchirwa, iye mutengesi anozvigadzirira nemusoro wekunzwisisa (chibvumirano), icho chinotaurira mutengo wemapato ese uye mutoro.
Mutengi anozobhadhara chikamu gumi muzana muzita remutengesi kuchengetedza nzvimbo yacho.
Zvichienderana nekuti mutengi arikubhadhara mari here kana kuti kuburikidza nechikwereti, danho rinotevera rinosanganisira bhangi remutengi iri kuita mutoo wekutarisa nzvimbo yacho uye nekuchengetedza kuti yakachengeteka zvakakwana.
Kana kamwe kubvumirwa kwekupedzisira kwaitwa uye mutengi agamuchira izvi. Iye mutengesi anozonyorera kuti agamuchire No Objection Chitupa (NOC) kubva kunogadzira.
Kugadzwa kunozoendeswa kuDhipatimendi reNyika kuti upedze kuendesa.
Iine maitiro ese akanyoreswa, mutengi anozofanira kubhadhara 2% uye AED315 kuDubai Land department, pamwe nemutengo wekutenga kumutengesi uye komisheni kumumiririri.
Mutengi anozogashira zita remvumo, iro richava muzita rake, pamwe nemakiyi nemakadhi ekupinda kuimba itsva.
Ndingaite sei kuchengetedza imba yekutanga kubvumirwa?
Kana iwe usingakwanise kubhadhara mari yenzvimbo, iwe unofanirwa kunyorera chikwereti chemo. Kuti uchengetedze kubvumirwa kwemendi, heano magwaro akareruka aunofanirwa kugadzirira:
Tsamba yemubairo kubva kune waunoshandira.
Mhoro unotsvedza iwe watambira.
Zvinotaurwa kubhengi kubva pamwedzi mitanhatu yapfuura.
Pasipoti kopi ine mufananidzo uye vhiza peji.
Kopi yeEmirates ID.
Kopi yezvirevo zvekadhi rechikwereti.
Iyo pre-yekubvumidza chikamu chechikwereti chinotora anopfuura mazuva manomwe kune vanokwereta vanobhadharwa uye zvinotora nguva yakareba kune vanhu vanozvishandira.
Ndedzipi mhando dzakasiyana dzemitengo yepfuma?
Ratidza Mutengo: Iko kubvunza mutengo wepfuma mutengo wenyorwa uyo unokwanisa kutaurirana.
Mutengo Wokutengesa: Mutengo wekutengesa mutengo unogadziriswa nemuridzi.
Kukosha Kwakajeka: Iko kukosha iyo inomisirwa estate yezvivakwa inopa nekuenzanisa kukosha kweiyo chivakwa nezvimwe zvinhu mumusika.
Ndeapi mamwe madhiri anofanira kufungwa nezvawo?
Kana zvasvika pakutengesa:
Kubvisirwa mari yekubhadhara (mari yekubvisa)
Kubviswa kwemabhadhariro ebasa / mari yekugadzirisa
Kugadziriswa kweDEWA / Kutonhora kwedunhu
Iyo Inogadzira NOC kana ichidikanwa
Mari yekutumira yakabhadharwa kubazi reNyika
Kana zvasvika pakutenga:
Mari dzakabvumiranwa sekubvumirana kwekutengesa pakati pevatengi nemutengesi
Kubatanidza kwemagetsi nemasimba emvura
Mari yekubhadhara chikwereti kana ichidikanwa
Mari yebasa remunharaunda
Miscellaneous admin fizi kubazi reNyika
Sangana negweta usati watenga nzvimbo muDubai, UAE Ita shuwa kuti zvibvumirano zvinokufukidza iwe zvizere kana paine gakava kana litigation. Tifonere izvozvi +97150 6531334
Vanodzidzisa kutenga imba muAU
Vokune dzimwe nyika (vasingagare muUAE) uye vanoenda kune dzimwe nyika vanogona kuwana kodzero yekuva muridzi wepfuma pazvivakwa pasina kurambidzwa